बंगलादेशले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न नि:शुल्क एस्तो सहयोग पठाउने, असल छिमेकी एस्तो पो हुन्छ ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/बंगलादेशले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न नि:शुल्क एस्तो सहयोग पठाउने, असल छिमेकी एस्तो पो हुन्छ !
कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि रेमडेसिभिर बंगलादेशले नेपाललाई सहयोग गर्ने भएको छ । बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत डा. वंशीधर मिश्रले नेपाल पठाउन पाँच हजार भाइल रेमडेसिभिर जुटिसकेको जानकारी दिए ।
‘औषधि सहयोग चाहियो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिठी आएको थियो । औषधिको व्यवस्थापन भइसक्यो, हवाई उडान छैन, गाडीबाट नै बिहीबार विराटनगर पुग्छ,’ डा. मिश्रले कान्तिपुरलाई टेलिफोनमा भने । औषधि व्यवस्था विभागले यति फर्मा, सिनर्जी र भियोभिस लाइफ साइन्सेस औषधि आयातकर्तालाई भारतबाट औषधि ल्याउने अनुमति साउन ३१ गते दिए पनि उनीहरूले पूर्ण मात्रामा ल्याउन सकेका छैनन् । विभाग र आयातकर्ताबीच भएको सम्झौताअनुसार दुई हजार भाइलका दरले तीन कम्पनीबाट ६ हजार भाइल औषधि ल्याउनुपर्ने थियो । आयातकर्ताले ७२ घण्टाभित्र ल्याउने भनेका थिए । ** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालले औषधि मागिरहेका छन् तर माग पूरा भएको छैन । विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीका अनुसार यतिले भारतको सिप्ला कम्पनीबाट ल्याउने भनेको रेमडेसिभिर ल्याएकै छैन । ‘दुई हजार भाइल औषधि ल्याउने भनेको भियोभिसले २ सय मात्रै ल्याएको छ भने माइलनबाट ल्याउने भनिएकामा पाँच सय २८ भाइल आएको छ,’ उनले भने, ‘के कारणले हो थाहा भएन ।’ ल्याएका औषधि भने कोभिड अस्पतालमा पठाइसकिएको उनले बताए । औषधि आयातका लागि कानुनी रूपमा सहज हुँदा विभागले बंगलादेशबाट ल्याउन चाहने आयातकर्तालाई पन्छाएर भारतबाट औषधि ल्याउन अनुमति दिएको थियो । अहिले भारतबाट ल्याउने भनिएको रेमडेसिभिर त्यहाँ निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
यो पनि : काठमाडौं उपत्यकामा थप ३७७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। विभिन्न प्रयोगशालमा गरिएको परीक्षणमा थप ३७७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले विहिवारको प्रेस कन्फ्रेन्समा यस्तो जानकारी दिएका हुन् । काठमाडौमा दिनहुँ कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । सोमबार २२४ जना र मंगलबार २३२मा ोरोना पुष्टि भएको थियो । त्यो संख्या बढेर बुधबार ३०१ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो।
विहिवार एकैदिन काठमाडौं उपत्यकामा ३७७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । जसमध्य काठमाडौका २७० जना, भक्तपुरका ४१ जना र ललितपुरका ६६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको डा।गौतमले जानकारी बताए । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार १ सय ११ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। योसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ३५ हजार ५२९ पुगेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा।डा। जागेश्वर गौतमका अनुसार १२ हजार ६ सय २९ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ११ सय ११ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा ५६९ जना डिस्चार्ज भएका छन्। योसँगै कोरोना जित्नेको संख्या २० हजार ७३ पुगेको छ। नेपालमा पीसीआर परीक्षणको कुल संख्या ६ लाख ४७ हजार ८८१ पुगेको छ। अहिले क्वारेन्टाइनमा ९ हजार ४८८ जना रहेका छन् ।
थप ३ जनामा कोरोना पुष्टि, धनकुटामा पहिलो पटक भेटियाे संक्रमितको संख्या २ सय ९५ पुग्यो